အက်ဖ်အေ ဖလား အကြိုဗိုလ်လု ပွဲစဉ်တွေ အတွက် လော်ရိုး ရဲ့ ခန့်မှန်းချက် - xyznews.co
အက်ဖ်အေ ဖလား အကြိုဗိုလ်လု ပွဲစဉ်တွေ အတွက် လော်ရိုး ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်
မန်စီးတီး vs လီဗာပူး
မန်စီးတီး ဖြတ်သန်းမှု – ဆွမ်ဒွန်း (3R) ၊ ဖူဟမ် (4R)၊ ပီတာဘရော့ (5R)၊ ဆောက်သမ်တန် (QR)
လီဗာပူး ဖြတ်သန်းမှု – ရှရူဘရီ (3R)၊ ကာဒစ်ဖ် (4R)၊ နော့ဝှစ်ချ် (5R)၊ ဖောရက်စ် (QR)
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ လီဗာပူး ကို နည်းနည်းလေး အသာပေးချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ကပိုပြီး လန်းဆန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
မန်စီးတီး က ကြားရက်မှာ စပိန်ကို သွားတယ် ၊ အေတီကို နဲ့ အကြိတ်အနယ် ကစားခဲ့ပြီး ၊ ဒဏ်ရာပြသနာ တစ်ချို့လဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ယာဂန် ကလော့ပ် ကတော့ အဓိက ကစားသမားကြီးတွေ ကို အနားပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်လေ။
ဒါကြောင့်လဲ မန်စီးတီး ဟာ အပြောင်းအလဲ တစ်ချို့ လုပ်လာနိုင်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး လူစာရင်းကို အပြည့်အ၀ သုံးနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ လီဗာပူး ကတော့ တောင့်တင်းမြဲ တောင့်တင်းနေဦးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပိုပြီး အားရမိတယ် ပြောတာပါ။
ခန့်မှန်းချက် – မန်စီးတီး 1-2 လီဗာပူး
ချဲဆီး vs ပဲလေ့
ချဲဆီး ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု – ချက်စတာဖီးလ်(3R)၊ ပလိုင်းမောက် (4R)၊ လူတန် (5R)၊ ဘိုရို (QR)
ပဲလေ့ ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု – မီဝေါလ် (3R)၊ ဟာတဲလ်ပူး (4R)၊ စတုတ် (5R)၊ အဲဗာတန် (QR)
ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ကစားသွားတဲ့ ချဲဆီး ရဲ့ ခြေစွမ်းက အရမ်းကို ကောင်းလွန်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ကနေ ထွက်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ အဲဒီပွဲ စွမ်းဆောင်ရည်က သောမတ်တူချယ် အသင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို လှစ်ပြနေတာပါ။
ပိုင်ရှင် ပြသနာတွေ တည်ငြိမ်သွားတဲ့ အနေအထားက သူတို့ကို အများကြီး အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကလပ် ကို ရုတ်တရက်ကြီး အရောင်းစာရင်း တင်လိုက်ရတော့ သူတို့လဲ ရှော့ရိုတ် သွားနိုင်သလို ၊ အနာဂတ် မသေချာမှုတွေလဲ ရှိခဲ့မှာပါ။ အခု ဆိုရင် လက်ရှိ ဥရောပ ချန်ပီယံ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုပါ လက်လွှတ်ရတော့မှာလေ။
ပဲလေ့ ဟာ ပင်ကိုယ်ပါရမီ ပြည့်ဝတဲ့ ခွှန်အားပြည့်ဝနေတဲ့ အသင်းပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ချာတိတ်တွေဟာ ဝင်ဘာလေ လို နေရာမျိုးမှာ ချဲဆီး ကို ရင်ဆိုင် ကစားဖို့ အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြီးမားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့် အမြင်ပြောရရင် တူချယ် ဟာ ပဲလေ့ တိုက်စစ် ၃ ယောက် ကို ထိန်းထားနိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေ နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရီးရဲ နဲ့ ပွဲတုန်းကလို အခွင့်အရေတွေ ဖန်တီးပြဦးမှာပါ။ ချဲဆီး က တိုက်စစ်ဆင်လာပြီ ဆိုတာ နဲ့ တော်တော်လေး အန္တရယ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ပဲ အလုပ်ကို ကောင်းကောင်း လုပ်ပြသွားမယ်လို့ ခံစားမိတယ်ဗျာ။
သုံးသပ်ချက် – ချဲဆီး 2-0 ပဲလေ့
ယူနိုက်တက် – နော့ဝှစ်ချ်
နော့ဝှစ်ချ် ဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေဆဲလား? သူတို့က လုံး၀ အလျှော့မပေးသေးတာတော့ သေချာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဘန်လေကို အနိုင် ကစားပြသွားတာ ကြည့်ရင်ပဲ ဒါက သိသာပါတယ်။
အေဂျက် နည်းပြ တန်ဟတ် က ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာသစ် ဖြစ်လာတော့မယ့် အကြောင်း ပြောဆိုသံတွေ ဆက်တိုက် ကြားနေရပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရန်နစ် က ကြားဖြတ် မန်နေဂျာ အဖြစ် ဆက်ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်လို့ ၊ အဲဒီ သတင်းတွေက ယူနိုက်တက် အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချဲဆီး မှာတုန်းကတော့ ဂုဟင့်ဒင့် ဟာ အဲဒီလို အနေအထားကနေ 2009 ခုနှစ် အက်ဖ်အေ ဖလား ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အချိန်က ချဲဆီး ကလဲ တောင့်တင်းပြီး ၊ အဝတ်လဲခန်း အတွင်း စုစည်းမှု အပြည့်ရှိတဲ့ စုဖွဲ့မျိုးမို့ပါ။ လက်ရှိ ယူနိုက်တက် မှာ အဲဒီ အကြောင်းအရင်းတွေ မရှိပါဘူး။
နော့ဝှစ်ကို အနိုင်ကစားပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမား တော်တော်များများ ကတော့ ဒီပွဲရလာဒ် က တကယ်ပဲ အရေးပါရဲ့လား ဆိုပြီး တွေးနေကြမှာပါ။ မန်နေဂျာသစ် ရောက်မှပဲ ဒီအကြောင်းအရင်းတွေကို ပြုပြင် ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းချက် – ယူနိုက်တက် 2-0 နော့ဝှစ်ချ်
ဆောက်သမ်တန် – အာဆင်နယ်
ဆောက်သမ်တန် ဟာ ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့6ပွဲမှာ5ပွဲ အထိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ် ကလဲ4ပွဲ မှာ3ပွဲ ရှုံးထားလို့ အတူတူ နဲ့ အနူနူပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ အာဆင်နယ် ဘက်မှာ ပါတေး ၊ တီယာနေး တို့ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ၊ အဲဒီနှစ်ယောက်ကို အခုထိ တမ်းတနေကြရတုန်းပါပဲ။
ကျနော် ကတော့ သူတို့ဟာ ဒီပွဲမှာ အနိုင်ရလာဒ်ကို ဦးတည်ပြီး ကစားမယ်လို့တောင် မထင်ဘူးဗျာ။
ခန့်မှန်းချက် – ဆောက်သမ်တန် 1-1 အာဆင်နယ်
စပါး 2-0 ဘရိုတ်တန်
ဝက်ဖို့ဒ် 1-2 ဘရန်းဖို့ဒ်
နယူးကာဆယ် 2-1 လက်စတာ
ဝက်စ်ဟမ်း 1-1 ဘန်လေ
Previous Article ဆီမွန်နီကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မြင်ချင်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြလိုက်ပြီး အက်သလက်တီကိုရဲ့ tactics ကို ကာကွယ်လိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
Next Article Paul Merson လာပါပြီ . . . FA Cup ဆီမီးဖိုင်နယ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၃၃ အတွက် ခန့်မှန်းသုံးသပ်ချက်များ